Tun Tun's Photo Diary: Langkawi Trip, Black Sand Beach #3
မြို.ထဲကနေ Black sand Beach ကို တော်တော်လေး သွားရတယ်။ မှတ်မိသလောက်တော့ မိနစ်၃၀လောက် ကားနဲ.သွားရတယ်။ လမ်းမှာ ရွာလေးတွေကို ဖြတ်သွားတယ်။ ကားသမား လိုင်စင်ကို သူမသိအောင် ဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့တယ်။ သူများနိုင်ငံမှာ တခုခု ဖြစ်ရင် သဲလွန်စ ရှာလို.ရအောင်လို.။ ဥပမာ- ကားပေါ်မှာ တခုခု ကျန်ခဲ့တာတို.။ အလိမ်ခံရတာ တို.ဆို ပြန်ရှယ်လို.ရအောင်ပေါ့။ ဒီကားဆရာ ကတော့ အင်မတန် သဘောကောင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် Langkawi ခရီး အစ၊အဆုံး သူ.ကို ငှားခဲ့တာပါ။
Black sand beach ကိုရောက်ပါပြီ။ ကမ်းခြေနားမှာ Food court ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့နေ.က ရောင်းတဲ့ သူမရှိဘူး။ ပိတ်ထားတယ်ဆိုပါတော့။ ဒါနဲ.ပဲ ကမ်းခြေဘက်ကို ဆင်းသွားလိုက်တယ်။
Black Sand Beach ဆိုလို. သဲတွေကို အမည်းရောင်ဖြစ်နေမယ်ထင်တယ်။ ပုံမှန် ကမ်းခြေနဲ.လဲ ဘာမှ မထူးဘူးလို. အစက ထင်လိုက်တယ်။ ဒီလိုနဲ. တဖြည်းဖြည်း ကမ်းခြေရဲ. အရှေ.ဘက်ခြမ်းကို လျှောက်သွားမှ သဲတွေ မည်းနေတာကို စပြီး တွေ.ရပါတယ်။
သဲတွေက အကုန်လုံးမဲနေတာ မဟုတ်ပဲ ကွတ်ကျားကွက်ကျားတွေ မဲနေတာပါ။ ပုံထဲမှာ တွေ.ရတဲ့ အတိုင်း အပေါ်ယံပဲ မဲနေတာ မဟုတ်ပဲ၊ အောက်အလွှာပါ မဲနေတာပါ။
Black sand on my hand.
ဘာလို. သဲတွေ မဲနေရတာလဲ ဆိုတာ သေချာမသိပေမဲ့။ ကျွန်တော် သိသလောက်ကတော့ ဒီနေရာမှာ ရေနံတွေ ထွက်လို. သဲတွေ မဲနေတယ်လို. ထင်တယ်။ ဟိုဘက်ကမ်းမှာလဲ ဓါတ်ငွေ.စက်ရုံလို ပုံစံ စက်ရုံတွေ ကို လှမ်းမြင်ရတယ်။
ကျွန်တော်ရောက်တုန်းက ကမ်းခြေမှာ ဘယ်သူမှ မရှိပါဘူး။ နောက်မှ ၂ဖွဲ.လောက် ရောက်လာပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲ ကမ်းခြေ တစ်လျှောက်လမ်းလျှောက် ပြီးလို. Sunset ကိုကြည့်ဖို. စောင့်နေခဲ့တယ်။ ရောက်တာ နည်းနည်းစောလို. Sunset ချိန်ရောက်ဖို.တော်တော်လေး စောင့်လိုက်ရတယ်။
အဲ့ဒီတုန်းက sunset ဓါတ်ပုံကို စမ်းပြီးရိုက်ချင်တာ။ တခါမှ ကောင်းကောင်းမရိုက်ဖူးဘူး။ တကယ် sunset ချိန်လဲရောက်ကော မရိုက်တက်ပဲ ရိုက်တာ ပုံထွက်တွေ သိပ်မကောင်းဘူး။ အခုနောက်ပိုင်းမှပဲ Sunset ဓါတ်ပုံ သေချာလေး ရိုက်တက်လာတယ်။
နေ၀င်သွားတော့ ကမ်းခြေမှာလဲ ဘယ်သူမှ မရှိတော့ဘူး။ လူပြတ်တာနဲ. ကားရပ်ထားတဲ့ နေရာကို ပြန်ပြီး Black Sand Beach ကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီပုံစံ အရဆိုရင် Black Sand Beach ကိုလာလည်တဲ့သူတွေ တော်တော်နည်းတယ်လို. ပြောလို.ရတယ်။ Hotel မပြန်ခင် လမ်းမှာ ညဈေး ကို ၀င်ပါတယ်။
ပုံထဲမှာ မြင်ရတဲ့အတိုင်း ဒီဈေးက ဈေးဝယ်တဲ့သူ လက်ချိုးရေလို.ရတယ်။ လူတွေအတွက် ရောင်းတာလား ၊ သရဲတွေ အတွက်ရောင်းတာလားလို.တောင် မေးခွန်းထုတ်ချင်စရာ။ တော်တော်ပျင်းစရာ ကောင်းပြီး ခြောက်ကပ်နေတဲ့ ညဈေးဆိုပါတော့။ ဆိုင်တွေလဲ သိပ်မရှိပါဘူး။ အလွန်ဆုံးရှိလှ ၁၅ ဆိုင်လှပေါ့။ ဒါနဲ.ပဲ ညဈေး မှာ အချိန်မဖြုန်းတော့ပဲ ဟိုတယ်ကို ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။
at 4/18/2015 04:46:00 AM